ဦးဝေဠုကျော်ရှေ့နေမှ မသင်းသင်းဦးအား မမှန်မကန်လိမ်လည် ထွက်ဆိုမှုဖြင့် အရေးယူပေးရန် ရုံးတော်တွင်လျှောက်ထားလိုက်ပြီ…. -
ဦးဝေဠုကျော်ရှေ့နေမှ မသင်းသင်းဦးအား မမှန်မကန်လိမ်လည် ထွက်ဆိုမှုဖြင့် အရေးယူပေးရန် ရုံးတော်တွင်လျှောက်ထားလိုက်ပြီ….
မသင်းသင်းမှတခြားအမျိုးသား တဦးကိုလည်း ကာမလိမ်လည်မှုနဲ့ တရား စွဲခဲ့ဘူးတဲ့ အတွေ့အကြုံရှိသူ ဖြစ်နေ
မသင်းသင်းဦး VS ကိုဝေဠုကျော်
ပြန်လှန်စစ်မေးခြင်း (ဒုတိယ) အကြိမ်ကိုဝေဠုကျော်၏ ရှေ့နေမှ မသင်းသင်းဦးအား စစ်မေးချက်များ ယခင် ရုံးချိန်းမှအဆက်
ရှေ့နေမေး ….စာမျက်နှာ ၂၅၄ မှ ၈၃၉ ထိသက်သေခံအဖြစ်တင်ပြထားသောသက်သေခံ (ည) (ဋ) (ဌ) အသံဖိုင်များ အနက်ကျန်ရှိသောစာမျက်နှာ ၂၅၄ မှ ၈၃၉ ထိ အသံဖိုင်များတွင်လည်း ကိုဝေဠုကျော် မှ ကျမအားလက်ထက်ပေါင်းသင်းပါမည် ဟု ကတိပေးပြောကြားထားသည့် စကားရပ်များ ပါဝင်ခြင်း မရှိဆိုလျှင်
ရှေ့နေမေး ……ကိုဝေဠုကျော် မှ မည်သည့် နေ့ရက်တွင် လက်ထပ်ပေါင်းသင်းပါမည်ဟု ကတိပေးစကားပါသော စာမျက်နှာ အား အတိအကျဖော်ပြပါဆိုလျှင်
မသင်းသင်းဦးဖြေ…….စာမျက်နာ(၁)မှ ၈၀၀ ကျော်ထိတင်သွင်းထားသည် သက်သေအသံဖိုင် စာသားများတွင် ကျမအားယူမည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရောက်သောစကားများစွာပါပါသည် မင်းနဲ့ ငါ နဲ့ ယူဖို့အချိန်ယူရအုံးမယ် လို့ ပြောထားသည် များရှိပါသည် ဝေဠုကျော် နှင့်ကျမ ဟိုတယ်တွင် ပထမဆုံးတွေ့သည့်နေ့က ဝေဠုကျော်က ကျမ၏ ကာမကို ရယူပြီးနောက် လက်ထပ်ယူမည် ဟုပြောသဖြင့် ၎င်း အပေါ် မုဒိန်းမှု့ဖြင့်တရားမစွဲ ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်..
ရှေ့နေမေး……..မသင်းသင်းဦး အနေဖြင့် ကိုဝေဠုကျော်ကမသင်းသင်းဦးအားလက်ထပ်ပေါင်းသင်းပါမည် ဟုသောကတိပေးပြောစကားအား မသင်းသင်းဦး ၏ ထွက် ဆိုချက် များမှလွဲ၍ အခြားသက်သေထင်ရှား ပြသနိုင်ခြင်းမရှိဟုဆိုလျှင်
မသင်းသင်းဦးဖြေ…….ရှိပါသည် ရုံးတွင်တင်ပြထားသည့် စာရွက် စာတမ်းများဖြစ်ပါသည်…
ရှေ့နေမေး……..မသင်းသင်းဦးအနေဖြင့် ကိုဝေဠုကျော်နှင့်မတွေ့ဆုံစဉ်က လူငယ်သဘာဝ ချစ်သူရည်းစားထားခဲ့ဖူးပါသလားဆိုလျှင်
မသင်းသင်းဦးဖြေ …… ထားခဲ့ဖူးပါသည် အိမ်ထောင်သည်မဟုတ်၍ဖြစ်ပါသည်
ရှေ့နေမေး…….၎င်းရည်းစားများနှင့် အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ထိရည်ရွယ်၍ချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြပါသလားလို့ ဆိုလျှင် ဟုမေးရာ
သင်းသင်း၏ရှေ့နေမှကန့်ကွက်ခဲ့ပါသည်ရုံးတော်မှ အမှုနှင့်ဆက်စပ်နေ၍ ဆက်လက်မေးမြန်းရန်ခွင့်ပြုမိန့်ချခဲ့ပါသည်
ရှေ့နေပြန်မေး… ၎င်းရည်းစားများနှင့်အိမ်ထောင်ပြုဖို့ထိရည်ရွယ်၍ချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြပါသလားလို့ဆိုလျှင် ဟုပြန်လည်မေးရာ
ရှေ့နေမေး……..မသင်းသင်းဦးစွဲဆိုခဲ့သည့်တရားခံမှာကိုမောင်စိုးဖြစ်ပြီး ရေနံချောင်းမြို့ တရားရုံး၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ပြစ်မှု့ကြီးအမှတ် ၂၃၆ ဖြစ်သည်ဟုဆိုလျှင်
ရှေ့နေမေး……..ကိုမောင်စိုး အား ကာမလိမ်လည်ရယူမှု့ ၄၁ရဖြင့် တရားစွဲ ပြီးနောက် အခြားမည်သည့်အမှုဖြင့်တရားစွဲ ဆိုခဲ့သေးလည်ဆိုလျှင်ဟု မေးသောအခါ သင်းသင်းရှေ့နေမှကန့်ကွက်ပြန်ပါသည်ရုံးတော်မှ အမှုနှင့် စပ်ဆက်နေသောကြောင့်ခွင့်ပြုလိုက်သည်
ရှေ့နေပြန်မေး…ကိုမောင်စိုးအားကာမလိမ်လည်ရယူမှု့ ၄၁၇ ဖြင့် တရားစွဲပြီးနောက်အခြားမည်သည့်အမှု့ဖြင့် တရားစွဲဆို ခဲ့သေးလည်ဆိုလျှင်
မသင်းသင်းဦးဖြေ,…….အခြားမည်သည့်အမမှုနှင့်မှစွဲဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါ ကိုမောင်စိုး အားစွဲဆိုမှု့ ၄၁၇ အမှုတွင်ကျမနိုင်ခဲ့ပါသည်အခြား အမှုနဲ့စွဲဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါ
ရှေ့နေမေး…..မသင်းသင်းဦးအနေဖြင့် ရုံးတော်ရှေ့တွင်ကျမ်း သစ္စာကိုင်၍ထွက်ဆိုနေပြီး လိမ်လည်ထွက်ဆိုပါကျမ်းသစ္စာပါအတိုင်းကျမ်းစူးမည့်အပြင်ရုံးတော်ရှေ့တွင်လည်းမမှန်မကန်သက်သေခံမှု့ဖြင့် တရားစွဲဆိုခံရမည်ကို သိပါသလားဟုဆိုလျှင်
ရှေ့နေမေး……မသင်းသင်းဦးအနေဖြင့် ကိုမောင်စိုးအားကာမလိမ်လည်ရယူမှု့စွဲဆိုပြီးနောက်ထိုအမှု့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ကိုမောင်စိုး အပေါ်တွင် လျှော်ကြေးငွေ သိန်း၃၀ ကျပ် လျှော်ကြေးရလိုကြောင်းတရားစွဲဆိုခဲ့ပါသလားဆိုလျှင်
ရှေ့နေမေး……..မသင်းသင်းဦးသည်ရေနံချောင်းတရားရုံး၏၂၀၁၂ခုနှစ် တရားမကြီးမှု့ အမှတ် ၄၁၇ အမှု့တွင်တရားလိုမသင်းသင်းဦး၏ ခွင့်ရကိုစားလှယ် ဦးတင်စိုး နှင့် တရားပြိုင် ကိုမောင်စိုး (ခ) ကိုမြင့်စိုး အား လျှော်ကြေးငွေကျပ် သိန်း ၃၀ လျှော်ကြေးရလိုမှု့စွဲခဲ့ရာတွင်လည်းအနိုင်ဒီဂရီ ရရှိခဲ့သည်ဟုဆိုလျှင်
ထိုအချိန်တွင် ကိုဝေဠုကျော် ၏ ရှေ့နေ မှ ထိုအမှု့၏မိတ္တူ မှန် စီရင်ချက် အား ရုံးတော် သို့ သက်သေ အဖြစ်တင်သွင်းရာ မသင်းသင်းဦး ၏ရှေ့နေ များမှကန့်ကွက်ခြင်းမရှိသဖြင့် ရုံးတော် မှသက်သေခံအဖြစ် လက်ခံသည်…
တစ်ဆက်တည်း……ကိုဝေဠုကျော်၏ ရှေ့နေ မှရုံးတော် ၏ရှေ့တွင် မမှန်မကန်ထိန်ချန်ထွက်ဆိုနေသော မသင်းသင်းဦးအား အရေးယူပေးပါရန်လျှောက်ထားခဲ့သည်….
ယနေ့ရုံးချိန်းဤတွင် ပြီးဆုံး၏နောက်အပတ်ရုံးချိန်းတွင် ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်…
Credit to ဟန်ငြိမ်းဦး
Previous post လေဖြတ်နေ တဲ့ အသက် (၇၀)ကျော် အမေ ကို အိမ်ဖော် နဲ့ ထားခဲ့ရပြီး မသင်္ကာ လို့ CCTV တပ်ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ
Next post ကိုပေါက်ရဲ့ဆေးထိုးဗွီဒီယိုမှာ အလှည့်ကျသွားတဲ့ ဟန်ဇာမိုးဝင်း၊တင်မောင်ဆန်းမင်းဝင်းနဲ့ တင်ဇာမော်